प्रकाशित मिति: Oct 6, 2019 3:11 PM | १९ असोज २०७६
काठमाडौं। दरबारमार्गमा अष्टमीको दिन दिउँसो २ बजेतिर एउटा स्पोर्टी कारले धेरैको ध्यान खिच्यो। सुन्तला रङको यो कार हत्तपत्त बाहिर देखिन्न।
रेष्टुराँमा खाना खाइरहँदा मलाई पनि यो कारको लुक्सले नतान्ने कुरै थिएन। टेबुलमा बिसाएको क्यामरा हत्तपत्त झिकेर म ओर्लिइहालेँ रेस्टुराँबाट सडकमा। दरबारको दक्षिणी गेटबाट आएको कार कता जाला भन्ने कौतुहलता थियो। धन्न, गाडी महेन्द्रको शालीक घुमेर जताबाट आएको त्यतैतिर मोडियो। त्यही मौकामा केही क्लिक गर्न भ्याइहालेँ। हत्तपत्त नदेख्ने भएकाले यो गाडीतिर धेरैको नजर पुगेको थियो।
स्टुडुबेकर कर्पोरेसनले सन् १९६२ मा बनाएको स्टुडुबेकर अवन्तीकै नामबाट यो कार भारतमा मोडिफाइड गरिएको रहेछ। सन् १९६२ र ६३ मा स्टुडुबेकर अवन्तीले अमेरिकामा तहल्का मच्चाएको रहेछ।
दरबारमार्गमा एक्कासी देखियो अवन्ती कार! हत्तपत्त देख्न नपाइने यसको के छ विशेषता? को लागी ४ प्रतिक्रिया(हरु)
Anoop[ 2019-10-12 02:42:55 ]
Suchavehicle to look again
हालसम्म १९१ जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।
NNNNN[ 2019-10-10 11:39:25 ]
Who is the owner of this car ?
Sandesh katuwal[ 2019-10-07 09:58:20 ]
I think this car might come frim other countries and might be lamborgini or ferrari
तोर्पे[ 2019-10-07 09:19:24 ]
गाडीवाला को रछ?त्यो पनि उल्लेख गरेको भए हुने।